Xukuumada Waqooyiga Kuuriya, oo digniin culus u dirtay Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriya. | Salaan Media
Home Wararka Xukuumada Waqooyiga Kuuriya, oo digniin culus u dirtay Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriya.
Xukuumada Waqooyiga Kuuriya, oo digniin culus u dirtay Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriya.
London 29.3.13 (SM) Sida ay sheegtay gabadh u hadashay TV-ga qaranka ee Kuuriyada Waqooyi, waxa heegan culus la geliyey dhamaan ciidamada wadanka Waqooyiga Kuuriya gaar ahaan gantaalada ridada dheerleh ee isaga gudba qaaradaha. Digniintan kaso baxday Waqooyiiga Kuuriya ayaa lagu sheegay in dhamaan gantaalaha ridada dheerleh lagu jeheeyey wadanka Maraykanka. Xukuumada Pyongyang ayaa sheegtay inay suurta gal tahay inay duqayso Maraykanka hadii xaalad dagaal ka qaraxdo deegaankaas.
Dawalada Maraykanka oo ka jawaabaysa digniinta Waqooyiga Kuuriya, ayaa soo dhigtay wadanka Koonfurta Kuuriya laba ka mida gantaalaha xambaara Nuclearka. Digniintan kasoo baxday Waqooyiga Kuuriya iyo talaabada ay kaga jawaabtay Xukuumada Washington, ayaa walaac ween ku abuurtay caalamka. Waxana hadalo kasoo kala baxay Mosco, iyo Beijing loogu baaqay dhinacyada is haya oo dhami inaanay marnaba sameen wax ficil ah, balse ay waan waan iyo wada hadal ku dhameeyaan khilaafaadka.
Arinta xiissaha gaarkaa leh ayaa waxay tahay, in markii ugu horeesay taariikhda ay Waqooyiga Kuuriya sheegtay inay weerarayso wadanka Maraykanka oo masaafo dheer u jira. Sida ay ku andacoonayso Xukuumada Peyonyang waxay sheegtay in Maraykanku soo hubeenayo Koonfurta Kuuriya oo ah cadawga koobad ee Waqooyiga, taa bedelkeedana ay iyagu duqeenayaan Maraykanka hadii dagaal qarxo.